Hambalyo iyo soo celinta Saddexagalka jabtay Oo ah Xisbiyada, Dawladda iyo mujtamacu | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Hambalyo iyo soo celinta Saddexagalka jabtay Oo ah Xisbiyada, Dawladda iyo mujtamacu
Aniga oo ku hadlaya magaceyga iyo magaca Xisbiga Xuriyadda waxaan Dr. Abdiweli Mohamed Ali Gaas ugu hambalyeynayaa doorashada uu ku guuleystey ee loogu doortay xilka madaxweynimada maamulka Puntland. Waxaan u rajeynayaa in xilka loo doortay uu ku guuleysto waxqabadeeda oo uu noqdo madaxweyne dib u soo celiya rajada loo qabo isbedel siyaasadeed oo dhaliya maamul wanaagsan , dimoqaraadiyad dhaba Iyo soo celinta Saddexagalka Jabay Oo ah Xisbiga , Dawladda Iyo Mujtamacu.
Waxaan rumeysanahay in Dr. Abdiweli Gaas uu yahay aqoonyahan nabad iyo horumar ku hogaamin kara xilka ay u doorteen shacabka Puntland, kana badbaadin kara shacabkiisa mariinhabaabinta siyaasadeed ee salka ku haysa isbeleysiga, qabyaalada, iyo adeegsiga xooga wax lagu xalinayo.
Waxaan aaminsanahay in gobolada waqooyi bari ay ka jirto dhibaatooyin badan oo u baahan si cilmiyeysan in loo darso, waxna looga qabto, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhaqanka musuqmaasuqa, gooni isku takoorka, burcadnimada, tahriibka, saboolnimada, iyo colaadaha laga curinayo degaanada deriska.
Maamulka oo la wanaajiyo waxey horseedeysa dhowrista xuquuqda dadka iyo xaqsoor guud oo ka dhaqangala guud ahaan maamulka dowlada wax hogaamineysa. Haddii la waayo xaqdhowrka dadka iyo garsoor dhexdhexaada waa dhalanteed in la helo nabadgelyo dhaba iyo barwaaqo-sooran ay wadaagaan shacabka Puntland oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay wadanoolaashaha salka ku haya ganacsiga dhexdooda ah iyo tan ay la wadaagaan ummadda Soomaaliyeed.
Xiriirka oodwadaagta oo la xoojiyo wuxuu maamulka u soo jiidayaa deriska oo soo geliya hanti badan iyo ganacsiga oo xoog isugu furma, taas oo keeneysa danaha nabad ku wadanoolaashaha oo cid walba danteeda ka dhex aragto iyo maamulka oo noqda xaruun ay dad badan oo kala degaan duwan ku soo xirmaan.
Siyaasada Puntland ma ahayn mid hormarsan sannooyinkii la soo dhaafay, waxaana nasiibdarro ahayd iney ka sii fogaaneysey dowlada dhexe iyo bulshada caalamka. Inkastoo ay jirto hogaanka dhexe oo lagu wada hungoobey, haddana siyaasada xumaatay waxaa qeyb ka ahaa hogaanxumida ka jirtey Puntland. Waxaan sidoo kale aan qarsooneyn muranka siyaasadeed ee ka taagan degaanada deriska la ah dhinaca waqooyi galbeed. Waxaa loo baahan yahay mariin nabadeed oo loo maro siyaasad cusub oo dadka u jeedisa mashruucyo shaqo abuuraya, kana sii jeedisa xasaradaha siyaasadeed oo abuuraya colaada iyo dagaalada aan xalka soo kordhineyn.
Dhibaatada ka dhex jirta gobolada waqooyi bari iyo waqooyi galbeed waa mid salka ku haysa jihada ay u kacdo hanaanka mustaqbalka siyaasadeed ee dhismaha dowlada dhexe ee Jamhuuriyada Soomaaliya, mana ahan cilad sahlan oo maamul gooniya uu iskiis uga bixi karo. Waxaan aaminsanahay dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo wanaagsan inay helideedu u tahay fure sidii loo xalin lahaa muranka siyaasadeed ee ka dhex aloosan maamulada ka jira degaanada dalka. Talada Muqdisho oo aan Soomaalida u toosin, xasaradahaas wax ka qabadkoodu waxey noqonayaan kuwo ay ku baxaan dhiig iyo dhaqaale badan, kuna dhamaada meesha ay hadda joogaan meel ka sii daran. Talada wanaagsan waa in la helo qaab ku meel gaara oo dadka degaanka loogu madaxbanaaneeyo ismaamulkooda, laga lana wadashaqeeyo sidii nabada loogu wada noolaan lahaa iyada oo la tixgelinayo iney jirto aragtiyo ismaandhaafsan oo u dhexeysa bulshada wada degan.
Waxaan si kal iyo laaba ugu rajeynayaa Dr. Abdiweli Gaas inuu ku guuleysto xilka ay u doorteen shacabka Puntland, kaas oo u baahan maskax furan oo dhalisa waxqabad muuqda iyo wadashaqeyn wanaagsan. Waxaan ku rajo weynahay inuu noqon doono madaxweyne hogaankiisa ay wax badan ugu hagaagaan Soomaalida gaar ahaan shacabka Puntland, iyo guud ahaan Soomaalida oo uu u noqdo hogaamiye ay ku hanweynadaan.
Soomaaliya waxey gashay xaalad halis badan. Next Post